Naftiinna Ha Habaarina
By ibrahim Aden shire January 17, 2018
Habaarku waxa uu ka mid yahay dagaalka lagalo noocyadiisa ugu halisan, habaarku waxa uu keenaa cirib xumo uusan keeni karin dagaalka gacanta ah, qofka la habaaray oo lala helay wuxuu sanado badan la baartaa cirib xumada iyo natiijada ka dhalato habaarka lagu gamay.
Waxaa kale oo la arkay inuuba ka talaabo xuduuda qofka la habaaray oo uu u gudbo faraciisa illaa dhawr fac.
Habaarku waa noocyo badan yahay ee waxaa ugu halisan midka uu qofku mutaystay ee waalidka iyo qaraabada ay ku gantaalaan qofka.
Waxaa jiro mid aabi iyo gardarro ugu dhoco qof aanwaxba galabsan balse waalidkii uu ku halgaaday si qooq iyo iskawarqab la aanah ugu dhoco.
Midkaan danbe dad badan oo bari ah ayuu dhibaateeyey reero badan oo ladan oo saldanada xajinwaayey barwaaqada Allaah siiyey ku mahadeedii laga waayey ayuu kooraha u gadiyey.
Inta badan wuxuu ka imaadaa waalid iskala waayey oo nimcadu ka badatay waxaad maqli heblo iyo hebel iyaga oo qoys buuxo ah ayay ishabaari jiteen caruurta habaari jireen, xoolaha habaari jireen illaa qoyskii uu noqday gal guray oo ay kasoo hartay dad aan macno lahayn oo aad mooddo geedo-rifan.
Aniga nin oday ah ayaa igu yiri waxaan ahaa guradanbays xanuunloow ah oo aan lagu xisaabtamin wiilal iyo gabdho walaalahay ah oo iga weyn waxtar ahna ay dhooban yihiin waxaana kusoo qaangaaray Aabahay iyo Hooyaday oo is habaaro Aabahay wuxuu dhihi jiray midkaan(aniga) ayaan cidda kaaga soo reebay sidii ayay moqotay oo wiilashii oodhan iyo gabdhihi waa laqmadeen anigaan aad arkaysid ayaa wax firay oo macno leh ka jiro.
Hadaba walaalayaal aan ka ilaalino habaarka ilmaheena Nabiguna wuxuu yiri:
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم رواه مسلم
(Naftiina ha habaarina oo awlaada ha ahaabrina oo xoolihiina ha habaarina waxaa jiro saacado samadu furan tahay oo waxa aad Allaah waydiisataan idiin yerlayo).
Gardarada-habaarku sii kala daranevkawaran hadaad ilmhadaa u habaarto adiga oo diidan wanaag uu qaraabada u sameeyey.
Meeshu waa baadiiye waa labo qoys oo hal nin wada lee yahay minweyn leh caruur qaangaartay iyo minyaro umul ah ilmo yaryarna haysato waxaa kale oo joogo odayga reerka hooyadii oo cad ah.
Badanaa baadka (daaqa) xooluhu cunnaan iyo biyaha way kala fogyihiin amin danbe ayuu kacaa qofka dhaaminayo.
Waxaa jirtay gabar reerka uwaynayd oo ahaa qof Allaah doortay hawlkar baarri ah oo reerka oodhan udhaamin jirtay.
Ilaa sadex rati ayay soo dhaamin jirtay hooyadeed, eedadeed iyo ayaydeed ayay midba rati u dhaamin jirtay kaligeed ayaa inta isku xiriirsato awrta soo dhaamin jirtay.
Arintii waxaa ka biyo diiday hooyadeed marar badana gabadha kala hadadashay inaysan naagta biyo usoo darin gabadhiina waxa ay tiri eedaday oo umul ah aniga oo joogo biyo masoo darayso.
Hooyadii habaar lawada maqlayo ayay gabadhii u miistay har iyo habayn maalitii danbe waxa ay tiri ( Heblooy Ilaahay waxaan ka baryay in lagugu dhoqo biyaha aad keenayso)
Markii ay gabadhii dhaankii furtay ayaa garabka salkiisa la tumaatiyey oo fajal-mawd la daray isla matkiina dhimatay biyihii ay keentayna lagu dhaqay.
Sheekooyinka ku saabsan qoysaska is habaaray oo isla helay aad ayay u badan tahay. Waalid badan ayaa caruurtoodii oo baariyaal ah u adeegayo habaar ku dulshubay oo uu ku dhacay illaa maantadan aynu joogno hoogii ka dhasahy habaarkii kibirka iyo caqli xumada ahaa wuxuu baday la il daran.
Waxaa kale oo aad maqlaysaa (dumarkaa ubadane) qofku marka uu la kulmo waxoogaa dhibaato ama imtixaan yar isaga oo leh: (war yaa ihabaaray oo ila helay).
Walaalayaal nolosha aduunyadu iyadaaba iska ah imtixaan joogto ah marna wanaag saafi ah lama helayo wax aad dhibsatana lama waayayo.
Waxa ay u baahan tahay inaanu sabir iyo dulqaad ku kabno oo aan u adkaysanno mashaakilkeeda joogtada ah saxna ma aha Waxkaste oo aadan doonayn marka ay kugu dhacaan in aa tahay qof habaaran oo bacaw ah.
Hadaba walaalayaal aan ka digtoonaano habaarka halaga waaniyo dadka qaraabada ah ee ishabaarayo.
W/Q Maxamed Ibrahim Xasan